Iindaba - Zingaphi owaziyo malunga nemifanekiso eqingqiweyo eyaziwayo e-10 kwihlabathi?
Zingaphi owaziyo malunga ne-10 eqingqiweyo eyaziwayo emhlabeni?
Zingaphi kwezi mifanekiso eqingqiweyo uzaziyo ehlabathini?Kwimilinganiselo emithathu, imifanekiso eqingqiweyo (Imifanekiso eqingqiweyo) inembali ende kunye nesiko kunye nokugcinwa kobutyebi. I-Marble, ubhedu, ukhuni kunye nezinye izinto ziyaqoshwa, zenziwe, zaza zaqanjwa ukwenza imifanekiso yobugcisa ebonakalayo nenesithuba esithile, ebonisa ubomi boluntu kunye nokubonisa iimvakalelo zobugcisa zamagcisa, Inkcazo yobugcisa yeenjongo zobuhle.Ukuphuhliswa kobugcisa bemifanekiso eqingqiweyo yaseNtshona kuye kwafumana iincopho ezintathu, kubonisa umfanekiso opheleleyo wobugcisa njengoko sazi njalo. Ifikelele kwincopho yayo yokuqala kwiGrisi naseRoma yamandulo. Inani eliphakamileyo lalinguPhidias, ngelixa i-Italian Renaissance yaba yincopho yesibini. Ngokuqinisekileyo uMichelangelo wayengoyena mntu uphambili kweli xesha. Kwinkulungwane ye-19, iFrance yayi ngenxa yempumelelo kaRodin kwaye yangena kwincopho yesithathu.
Emva kukaRodin, umfanekiso oqingqiweyo waseNtshona wangena kwixesha elitsha-ixesha lemifanekiso eqingqiweyo yale mihla. Amagcisa aqingqiweyo azama ukulahla amatyathanga oqingqiweyo weklasikhi, amkele iindlela ezintsha zokubonisa, kwaye alandele iikhonsepthi ezintsha.
Kule mihla, singabonisa indalo yezobugcisa kunye nokuqhekeka kwethuba ngalinye kwimbali ye-panoramic yobugcisa bemifanekiso eqingqiweyo, kwaye le mifanekiso iqingqiweyo ilishumi kufuneka yaziwe.
Ukuqhekeka kweNefertiti ngumzobo oneminyaka engama-3 300 ubudala opeyintiweyo owenziwe ngelitye lekalika nakwiplasta. Umfanekiso oqingqiweyo nguNefertiti, uMfazi oMkhulu wasebukhosini uFaro wase-Akhenaten wamandulo. Kukholelwa ngokubanzi ukuba lo mfanekiso uqingqwe ngumkroli uThutmose ngo-1345 BC.
Ukuqhekeka kweNefertiti kuye kwaba yenye yezona zinto zixabisekileyo kakhulu kwi-Egypt yamandulo enezona ziveliso zininzi. Umboniso weenkwenkwezi weMyuziyam yaseBerlin kwaye uthathwa njengesalathiso sobuhle bamazwe aphesheya. Imifanekiso eqingqiweyo kaNefertiti ichazwa njengomnye wemisebenzi yobugcisa obudumileyo kubugcisa bamandulo, xa kuthelekiswa nemaski kaTutankhamun.
“Lo mfanekiso ubonakalisa umntu obhinqileyo onentamo ende, amashiya amahle, amarhamncwa aphakamileyo, impumlo ende ebhityileyo, nemilebe ebomvu enoncumo oludlamkileyo. Yenza iNefertiti ibe ngumsebenzi wobugcisa wakudala. Omnye wabafazi abahle. ”
Ikhona kwimyuziyam entsha kwisiQithi seMyuziyam eBerlin.
Uthikazikazi woloyiso eSamotrace
Uthixokazi woloyiso eSamotrace, umfanekiso oqingqiweyo wemabhile, 328 cm ukuphakama. Ngumsebenzi wokuqala womfanekiso odumileyo owasinda kwixesha lakudala lamaGrike. Ithathwa njengobuncwane obunqabileyo kwaye umbhali akanakuvavanywa.
Yindibaniselwano yobugcisa obungqongqo nobuthambileyo obenziweyo ukukhumbula ukoyiswa kukaDemetrius, umnqobi weSamothrace kwimfazwe yamandulo yamaGrike, ngokuchasene nemikhosi kaKumkani uPtolemy wase-Egypt. Malunga ne-190 BC, ukwamkela ookumkani aboyisileyo kunye namajoni, lo mfanekiso wawumiwe phambi kwetempile eSamothrace. Ukujongana nomoya waselwandle, uthixokazi wayolula amaphiko akhe amnandi ngokungathi wayeza kuwamkela amaqhawe awayeze elunxwemeni. Intloko kunye neengalo zomfanekiso oqingqiweyo zenzekile, kodwa umzimba wakhe omhle usenokutyhilwa ngeengubo ezibhityileyo kunye nezibaya, kubonakalisa amandla. Umfanekiso wonke unomoya omninzi, obonisa umxholo wawo kwaye ushiya umfanekiso ongalibalekiyo.
ILouvre ekhoyo eParis yenye yezinto ezintathu zobuncwane beLouvre.
I-Aphrodite yeMilos, ekwabizwa ngokuba yiVenus ngeBroken Arm. Iyaziwa njengeyona mifanekiso mihle phakathi kwemifanekiso eqingqiweyo yabasetyhini bamaGrike ukuza kuthi ga ngoku. UAphrodite uthixokazi wothando nobuhle kwiintsomi zamandulo zamaGrike, kwaye ungomnye woothixo abalishumi elinababini baseOlimpus. U-Aphrodite akangoothixokazi wesini kuphela, ukwanguthixokazi wothando kunye nobuhle emhlabeni.
U-Aphrodite unomfanekiso ofanelekileyo kunye nokubonakala kwamabhinqa amandulo amaGrike, efuzisela uthando kunye nobuhle babafazi, kwaye uthathwa njengowona mqondiso uphakamileyo wobuhle babasetyhini. Ngumxube wobuhle nomtsalane. Yonke indlela aziphatha ngayo kunye nolwimi kufanelekile ukuba zigcinwe kwaye zisetyenziswe kwimodeli, kodwa ayinakubonisa ubunyulu babasetyhini.
Oko iingalo ezilahlekileyo zikaVenus ezinezixhobo ezaphukileyo ekuqaleni zazikhangeleka ngathi yinto efihlakeleyo enomdla kakhulu kubazobi nakwimbali. Umzobo okhoyo ngoku useLouvre eParis, obunye bobutyebi abathathu.
Imifanekiso eqingqiweyo yobhedu kaDonatello “uDavid” (c. 1440) ngumsebenzi wokuqala wokuvuselela isithethe sakudala semifanekiso eqingqiweyo enqunu.
Kumfanekiso oqingqiweyo, lo mfanekiso weBhayibhile awuselulo uphawu lwengqondo, kodwa bubomi benyama, negazi. Ukusetyenziswa kwemifanekiso yobunqunu ukubonisa imifanekiso yenkolo kunye nokugxininisa kubuhle benyama kubonisa ukuba lo msebenzi ubaluleke kakhulu.
Xa uKumkani uHerode wakwa-Israyeli walawula ngenkulungwane ye-10 BC, amaFilisti ahlasela. Kwakukho igorha eligama linguGoliyati, elaliziimitha ezisi-8 ubude kwaye lixhobe nge-halberd enkulu. AmaSirayeli awazange alwe kangangeentsuku ezingama-40. Ngenye imini, uDavid oselula waya kumntakwabo owayesemkhosini. Weva ukuba uGoliyati wayelawula kakhulu kwaye enzakalisa ukuzithemba kwakhe. Wanyanzelisa ukuba uKumkani uHerode avume ihlazo lakhe lokuphuma abulale amaSirayeli eGoliyati. UHerode wayengenakukucela oko. Emva kokuba ephumile uDavid, wagquma wabetha uGoliyati entloko ngomatshini wokulingisa. Isigebenga esothukileyo sawela phantsi, waza uDavide walirhola ikrele lakhe, wanqumla intloko kaGoliyati. UDavid uboniswa njengenkwenkwana engumalusi emfanekisweni, enxibe umnqwazi, ephethe ikrele ngesandla sakhe sasekunene, enyathela entlokweni kaGoliyati. Inkangeleko yobuso bakhe ikhululekile kwaye ibonakala ngathi inekratshi.
IDonatello (iDonatello 1386-1466) yayisisizukulwana sokuqala samagcisa oKuqala kwe-Renaissance e-Italiya kunye nomdwebi obalaseleyo wekhulu le-15. Umzobo ngoku ukwigalari yeBargello eFlorence, e-Itali.
Umfanekiso oqingqiweyo ka "David" wenziwa ekuqaleni kwenkulungwane ye-16. Isifanekiso sinobude beemitha ezi-3.96. Umsebenzi omelwe nguMichelangelo, inkosi ye-Renaissance eqingqiweyo. Ithathwa njengeyona mifanekiso iqingqiweyo yamadoda iqhayisa kwimbali yobugcisa baseNtshona. Imifanekiso kaMichelangelo yentloko kaDavid yajika yaya kancinci ngasekhohlo ngaphambi kwedabi, amehlo akhe ethe ntsho kutshaba, isandla sakhe sasekhohlo sasiphethe isilingi egxalabeni, isandla sakhe sasekunene sijinga ngokwendalo, amanqindi akhe ethe khunxe, imbonakalo yakhe izolile, ibonisa ukuzola kukaDavide , isibindi kunye noloyiso lokoyisa. Ekhoyo kwiFlorence Academy yoBugcisa boBugcisa.
IStatue of Liberty (Statue of Liberty), ekwabizwa ngokuba yiLiberty Enlightening The World (Liberty Enlightening The World), sisipho seminyaka eli-100 saseFrance sasiya eUnited States ngo-1876. IStue of Liberty yagqitywa ngumdwebi wemifanekiso eqingqiweyo waseFransi uBartholdi kwiminyaka eli-10. Inenekazi lenkululeko linxibe iimpahla zamandulo zamaGrike, kwaye isithsaba esimbetheyo luphawu lweentambo ezisixhenxe zamazwekazi asixhenxe kunye neelwandlekazi ezine zehlabathi.
Uthixokazi uphethe itotshi efuzisela inkululeko kwisandla sakhe sasekunene, kwaye isandla sasekhohlo siphethe “iSibhengezo senkululeko” esibhalwe ngoJulayi 4, 1776, naphantsi kweenyawo zakhe kuqhawuke oomakhamandela, amakhamandela namatyathanga. Ufuzisela inkululeko kwaye ukhululeke kwizithintelo zobuzwilakhe. Yagqitywa yaza yatyhilwa ngo-Okthobha 28, 1886. Isakhiwo sangaphakathi somfanekiso oqingqiweyo wentsimbi sayilwa nguGustave Eiffel, owathi kamva wakha i-Eiffel Tower eParis. IStatue of Liberty ziimitha ezingama-46 ukuphakama, zinesiseko seemitha ezingama-93 kwaye zinobunzima ngeetoni ezingama-225. Ngo-1984, iSitatimende soKhuseleko sasidweliswe njengelifa lemveli lehlabathi.
Umntu ocinga kakuhle
"I-Thinker" ibumba umntu osebenzayo. Isigebenga sasigobile, amadolo egobile, isandla sasekunene siphumze isilevu, sithule sibukele le ntlekele yenzeke apha ngezantsi. Amehlo akhe anzulu kunye nesimbo sokubamba inqindi ngemilebe yakhe kubonise imeko ebuhlungu kakhulu. Umzobo oqingqiweyo uhamba ze, ngesinqe esigoqiwe kancinci. Isandla sasekhohlo sibekwe ngokwendalo edolweni lasekhohlo, umlenze wasekunene uxhasa ingalo yasekunene, kwaye isandla sasekunene siyasuswa kumfanekiso oqingqiweyo wesilevu. Inqindi elishiyiweyo licinezelwe emilebeni. Ilungile kakhulu. Ngeli xesha, izihlunu zakhe ziyangxama, zityhila imigca epheleleyo. Nangona umfanekiso womfanekiso oqingqiweyo usahleli, kubonakala ngathi ubonakalisa ukuba wenza umsebenzi onamandla aphezulu ngentetho ethembekileyo.
"Ingcinga" yimodeli kwinkqubo yonke yemisebenzi ka-Auguste Rodin. Ikwayimbonakalo kunye nokubonisa indlela yakhe yobugcisa yobugqi. Ikwabonisa ukwakhiwa kwakhe kunye nokudityaniswa kwengcinga yobugcisa bukaRodin Inkqubo yobungqina bokucinga.
UJeff Koons (uJeff Koons) ngumculi odumileyo waseMelika. Ngo-2013, inja yakhe yebhaluni (iorenji) yayenziwe ngentsimbi engenanto engenanto, kwaye uChristie wakwazi ukuseta ixabiso lama- $ 58.4 ezigidi. Iikhoon zenze nezinye iinguqulelo ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, magenta, ebomvu nebomvu.
Umsebenzi odumileyo "Isigcawu" nguLuis Bourgeois ungaphezulu kweenyawo ezingama-30 ubude. Into enomdla kukuba umfanekiso wesigcawu omkhulu unxulumene nomama wegcisa, owayengumlungisi wekhaphethi. Ngoku, imifanekiso eqingqiweyo yesigcawu esiyibonayo, ebonakala ngathi ibuthathaka, imilenze emide, ngesibindi ikhusela amaqanda emarmore angama-26, ngokungathi aza kuwa phantsi ngoko nangoko, kodwa kananjalo aphembelele uloyiko eluntwini, izigcawu ziyimbonakalo yazo ephindiweyo Imixholo ibandakanya isigcawu Ngo-1996 lo mzobo useMyuziyam yaseGuggenheim eBilbao. ULuis Bourgeois wakhe wathi: Umdala umntu, ulumkile.
Ngubani odale iTerracotta Warriors kunye namaHashe eQin Shihuang? Kuqikelelwa ukuba akukho mpendulo, kodwa iimpembelelo zayo kwizizukulwana ezizayo zobugcisa zisekhona nanamhlanje kwaye ziye zaba yifashoni.